इटहरीमा काँग्रेस नै किन ?
२०७४ असार ७ बुधबार, –अहिले देशैभर राज्य पुनःसंरचनापछि पहिलो चोटी स्थानीय तहको निर्वाचनको महोल चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा आदरणीय समाजका अगुवा सञ्चारकर्मी मित्रहरु मार्फत इटहरीका विषयमा मेरो अध्ययन, विश्लेषण र मेरो आत्माले अनुभूत गरेका दृष्टान्तसहित इटहरीमा नेपाली काँग्रेसले किन नेतृत्व लिन जरुरी छ, भन्ने विषयमा आम नगरवासीमा यहाँको यथार्थ विषय वस्तु सहितको विकास अवधारणालाई सार्वजनिक गर्ने प्रयास एवं जमर्को गर्न चाहान्छ । ... बाँकी अंश»
इटहरीलाई प्रदेश नम्बर एकको राजधानी बनाउने छु : कांग्रेस मेयरका उम्मेद्धार रोहित प्रसाद प्रसाई
२०७४ असार ५ सोमबार, इटहरी उपमहानगरपालीकामा देशकै ध्यान केन्द्रित छ। काठमाडौं पछि उपमहानगरपालीका भए पनि इटहरीमा केन्द्रिय नेताहरुको आँखामा पर्ने गरेको छ। ब्यापारीक शहरको रुपमा स्थापीत इटहरीमा दुई दुई कार्यकाल उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको चुनावमा अत्याधिक मत लिएर विजयी भएका नेपाली कांग्रेसका इटहरीका मेयरका उम्मेद्धार रोहित प्रसाद प्रसाई इटहरीको नौलो नाम हैन। ... बाँकी अंश»
२०७४ असार ५ सोमबार, विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै देशको ४० प्रतिशत भु–भुभागमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेका छन्। त्यसै अनुरुप दोस्रो चरणमा देशको अन्य बा“की भागमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन। मधेशकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउन पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एक महिनाको फरक पारियो। ... बाँकी अंश»
कसले कमजोर बनाउँदैछ अमेरिकालाई ?
२०७४ असार ४ आइतबार, काठमाडौं । विश्वको शक्तिराष्ट्र बन्ने चाहना विश्वका सबै मुलुकलाई हुन्छ तर सबैले यो स्थान हासिल गर्न सक्दैनन् । अहिले अमेरिका विश्वको शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न चाहने मुलुक पछिल्लो समय भने केही कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ । विश्वको पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिका अबको केही समयमा नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्नसक्ने देखिन्छ । ... बाँकी अंश»
हिन्दू धर्ममा शव यात्रापछि किन नुहाउनुपर्छ ? यस्ता छन् धार्मिक र वैज्ञानिक कारण
२०७४ असार २ शुक्रबार, काठमाडौं । तपार्इले पनि जो कोही हिन्दू धर्मालम्बी मलामी गएर फर्किएपछि अनिवार्य रुपमा नुहाएको देख्नु भएकै होला । तर, उनीहरुले किन नुहाउनै भन्ने बारे सबैलार्इ जानकारी नहुन सक्छ । ... बाँकी अंश»
आतंकवादको नाममा कतारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले २२ मा हुने बिश्वकपमा असर पार्ला ?
२०७४ असार १ बिहिबार, काठमाडौं। अहिले कतारमाथि साउदी अरेबिया, इजिप्ट, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । एक साताअघि गरिएको यो निर्णयमा थप तीन मुलुकहरुले पनि समर्थन जनाएका थिए। पछिल्लो समय आर्थिक हिसाबमा उल्लेख्य सुधार गर्न सफल रहेको मुलुकमाथि आतंकवादलाई सहयोग गरेको आरोपमा उनीहरुले प्रतिबन्धको निर्णय गरेका हुन्। ... बाँकी अंश»
अनाथ बालबालिकाले भने, ‘कसले देला सहारा’
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, डोल्पा । डोल्पाका दुर्गम गाउँका झन्डै एक दर्जन बालबालिका सहारा विहीन भएका छन् । मुख्य अभिभावक नै गुमाएपछि लालनपालन तथा शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उनीहरु बेसाहारा बनेका हुन् । ... बाँकी अंश»
'हिमालको राजा' दार्जिलिङमा किन बढ्यो आन्दोलनको राप ?
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय भारतमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले चर्किरहँदा नेपालमा पनि यसले चर्चा पाउन थालेको छ । दार्जिलिङमा चलिरहेको यो आन्दोलनको यस पटकको मूल कारण भने भाषाविशेष रहेको छ । यद्यपि यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु यसअघि पनि विभिन्न विषयहरुमा हुँदै आएका थिए । ... बाँकी अंश»
कहाँ उर्लेला र ! बेतुके–भांगडाको स्वरले आन्दोलनको उभार
२०७४ जेठ २९ सोमबार, कांग्रेसको सानेपा कार्यालय ‘पूर्व’ फर्केको छ । राजपाको बबरमहल अफिसमा पश्चिमी ढोका छ । नयाँ शक्तिको कार्यालय देखेको छैन, त्यसैले उत्तर फर्केको छ कि दक्षिण छ ? पत्तो छैन । यसरी दलहरुका प्रवेशद्वार भिन्न–भिन्न दिश र दशा उन्मुख छन् । र, यसैले कुरो बिग्रेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ २८ आइतबार, हरेक विरामीको उपचारमा झन्डै ५५ प्रतिशत खर्चको हिस्सा औषधिजन्य पदार्थको नै हुन्छ। त्यसैले पनि औषधीको बिषय हरेक नागरिकको सरोकारको विषय हो र बन्नु पर्छ पनि। नेपालमा पनि यसका बिषयमा हुन थालेका बहसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु पर्दछ। ... बाँकी अंश»
ओरालो लाग्दै अखवार बजार, २०१६को सबैभन्दा नराम्रो पेशा 'पत्रिकाको संवाददाता'
२०७४ जेठ २७ शनिबार, काठमाडौं । विश्व पत्रकारिताको बजारमा सबैभन्दा पुरानो माध्यमको रुपमा रहेकोे पत्रपत्रिकाको बजार दिन दुई गुणा त रात चार गुणा गरी खस्किँदै गईरहेको छ । विश्वमा नाम चलेका पत्रपत्रिकाहरुको बजार समेत भटाभट खस्किँदै जाँदा अब अखवारी युग भने विस्तारै अवसानको बाटोतिर लागेको मान्न थालिएको छ । अहिले विश्वका चर्चित पत्रिकाहरुको पाठक समेत वार्षिक १२ देखि ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउँदै गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा नाम चलेको पत्रपत्रिकाहरु इकोनोमिक टाईम्स, वासिंटन पोष्ट, द गार्जियन जस्ता पत्रपत्रिकाहरु पनि आफ्नो बैकल्पिक बाटोको खोजीमा लागिसकेका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री, देउवाका लागि युग पुरुष बन्ने अवसर
२०७४ जेठ २६ शुक्रबार, काठमाडौँ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलवार संसदबाट चौथो पटक ४०औँ नेपाल को प्रधानमन्त्री को रुप मा निर्वाचित भएका छन् | ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ २५ बिहिबार, वाशिङ्टन डिसी। हालैका दशकमा, अरब राष्ट्रका लाखौँ जनता चरम गरीबीबाट माथि उठाइएका छन्। तर अर्थतन्त्रको गिरावट र डरलाग्दो वेथितिका कारण प्रगति अहिले ढिलो हुने वा उल्टिने खतरा पनि रहेको छ। ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ २३ मंगलबार, काठमाडौँ। ‘बाह्र वर्षपछि खोलो फर्कन्छ’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएको छ । अन्ततः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नेपालको ४० औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
काठमाडौंको मतादेशः ' राईइ टु रिजेक्सन '
२०७४ जेठ १६ मंगलबार, काठमाडौं। देशले नयाँ बाटो लिँदैछ। नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने क्रमसँगै पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई परिणाम आएको छ। निर्वाचनमा हारजीत स्वभाविक हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानिय तहको चुनाव गराउन गरेको आँट र देखाएको साहसिक कदमले उहाँको राजनैतिक उचाई धेरै बढाएको छ। ... बाँकी अंश»
पाषण–मृत्युलाई जित्ने गीत
२०७४ जेठ १६ मंगलबार, काठमाडौं । तक्मा–पदक, पुरस्कार–सम्मान आफूभन्दा टाढै बस्थ्यो । अकल्पनीय मूल्यांकनमा पदक घोषणा सुन्नासाथ धेरै बधाई र शुभेच्छा प्रकट भए । तर ती सबैमध्ये मैले कैलाशलाई साधुवाद्को सूचीमा समेट्न सकिँन । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रपतिको कालो चस्मा र प्रधानमन्त्रीको दौराको फेरोमा अड्किएको मेरो गणतन्त्र
२०७४ जेठ १५ सोमबार, सधै जसो जेष्ठ १५ को विहान पनि दशरथ रंगशाला पुग्ने योजनाका साथ स्कुटरबाट रंगशालाको यात्रा तय भयो । शनिबार पनि होइन किन आज सडक खाली छ, अलि चाँडै पो आइएछ कि कसो सोच्दासोच्दै रंगशाल पुगियो । ... बाँकी अंश»
यस्तो आयो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
२०७४ जेठ १५ सोमबार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आचारहिताका कारण ल्याईएको सरकारको कामचलाउ बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुसँगै संविधान र स्थानीय तह कार्यान्वयन तर्फ बजेट केन्द्रीत गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ ११ बिहिबार, काठमाडौं। स्थानिय तहको चुनाव पछि स्थानिय तहमा बन्ने सरकारको बारेमा धेरैको चासो देखिन्छ । यहि चासोलाई सम्वोधन गर्ने गरि संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकार गठनका प्रक्रियामा केन्द्रित रहि यो सामग्री तयार गरिएको छ। ... बाँकी अंश»
प्रचण्डको सम्बोधन र राजीनामा : यस्तो छ पूर्णपाठ
२०७४ जेठ १० बुधबार, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । दाहालले नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिताको खडेरी नै परेको भन्दै समहमति पालनाका क्रममा आफुले गरेको राजीनामाले खडेरी चिर्ने बताए । ... बाँकी अंश»